I-Sky Villa | Iivillas zeRocks - I-Airbnb
I-Sky Villa | Iivillas zeRocks
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguJanine
I-Sky Villa yethu yeyona ndawo yabucala kwaye iphangaleleyo yokuzimela!
Indawo yokuhlala evulekileyo ye-140 m2 evulekileyo inegumbi lokuhlala elikhulu elinekhitshi eligcweleyo, amagumbi amabini okulala ahlukeneyo aneebhedi zenkosi, amagumbi okuhlambela ama-2 kunye ne-balcony enophahla enombono omangalisayo wolwandle!
Uya kufumana inkonzo epheleleyo kunye nokucoca imihla ngemihla, ifowuni ephathwayo apho unokufowunela ukuhanjiswa kokutya okanye iteksi naphi na apho ukhoyo.
Iivillas zethu zeboutique kunye nephuli yakhelwe endulini, ejikelezwe lihlathi elishinyeneyo elishinyeneyo, amatye anomtsalane egranite kunye nemithi yekhokhonathi. Relax kwaye wonwabele iimbono zolwandle eziphefumlayo kunye nokutshona kwelanga okungalibalekiyo kwibalcony yakho.
Iqula lethu lokuqubha labucala le-infinity-edge lilodwa lisetyenziswa ziindwendwe zethu. Idama liziimitha ezisi-7 ubude kwaye lijonge elwandle.
Lilonke sine-Sunset Villa, ii-Seascape Villas ezimbini kunye ne-Sky Villa enye kwi-4000 square metres yepropati. I-pool yabelwana phakathi kweevillas zethu ezine.
Eyona ndawo iyimfihlo, iSky Villa yethu ikweyona ndawo iphezulu yepropathi yethu, imi yodwa ingqongwe ngamahlathi ashinyeneyo kunye namatye anomtsalane egranite. Inika eyona mbono iphefumlayo kulo lonke ibhayi kunye nolwandle. Ngaphakathi, iisilingi eziphakamileyo kunye nesicwangciso esivulekileyo sendawo yokuhlala, ikhitshi kunye nebalcony zihambisa imvakalelo yendawo kunye nesitayile. Isithuba esingaphakathi siphumela ngaphandle nangona ucango olugotyiweyo oluziimitha ezisi-8,5 kwibalkoni yomthi. Igumbi lokulala elikhulu likwinqanaba elahlulahlulwe elinendawo yeofisi enesisa ejikelezwe ziifestile ezinkulu ukukunika umbono omangalisayo ofanayo wepanoramic ukusuka ebhedini okanye ukuhlala kwikhompyuter yakho. Igumbi lokulala lesibini liphumile kwigumbi lokuhlala kwaye liqhagamshelwe kwigumbi lalo lokuhlambela.
Indawo yokuhlala enomtsalane eyi-140 m2 inegumbi lokuhlala, ikhitshi, ibalcony, igumbi lokulala elikhulu elinendawo yeofisi, ibhedi enkulu yokumkani ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite, igumbi lokulala lesibini elinobukhulu bebhedi kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite.
4.90 · Izimvo eziyi-48
Sikwindawo engaphantsi kwemizuzu eli-10 yokuhamba ukuya emantla onxweme oluphambili lwe-Koh Tao 'Sairee'. Apho uya kufumana ukhetho olubanzi lweendawo zokutyela kunye nemivalo ecaleni kolwandle. Ngemizuzu eli-15 yokuhamba, uyakufika kwilali yaseSairee uyokuthenga, iindawo zokutyela ezininzi, iibhari kunye nobomi basebusuku.
Eyona ndlela ilula yokufika e-Koh Tao kukubhabha uye kwiSiqithi sase-Koh Samui, unesikhululo seenqwelomoya saso samazwe ngamazwe. Ukusuka eSamui, eKoh Tao kukuhamba iiyure ezimbini kuphela ngesikhephe. Izihlandlo ezithathu ngemini kukho izikhephe ezifanelekileyo zomoya ezifumanekayo ukuya nokubuya eKoh Samui naseKoh Phangan. Kukwakho nezikhitshane ezimbini ngosuku ukuya nokubuya eChumphon kumhlaba omkhulu.
Nceda ungalibazisi ukuqhagamshelana nathi ngolwazi oluthe vetshe.
Umbuki zindwendwe ngu- Janine
Ukusetyenziswa kwasimahla kwefowuni ephathwayo ngexesha lokuhlala kwakho, qhagamshelana nathi ngayo nantoni na onokuyidinga .. naphi na apho ukhoyo! Siyavuya ukwenza izindululo malunga nezona zinto zilungileyo zokuzibona nokwenza eKoh Tao. Siza kukunika ujongo olupheleleyo ngemephu kunye neengcebiso ezintle ekungeneni. Ulawulo lwethu luhlala lukhona ukuze luncede ukulungelelanisa ugcino lokubhukisha isidlo sangokuhlwa, iihambo zemini okanye iirenti.
Ukusetyenziswa kwasimahla kwefowuni ephathwayo ngexesha lokuhlala kwakho, qhagamshelana nathi ngayo nantoni na onokuyidinga .. naphi na apho ukhoyo! Siyavuya ukwenza izindululo mal…
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 12:00 - 20:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Koh Tao